ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာ သွားစရာလာစရာလေးတွေ (၁၁.၁၁.၂၀၁၇)
9 Nov 2017 . 4:46 PM
အခရာပရိသတ်ကြီးရေ… ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ သောကြာညလေး ဖြစ်ပါစေလို့ အရင်ဆုံး ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ ဒီတစ်ပတ် တင်္နလာနေ့အပါအဝင် ၃ ရက်တောင် ပိတ်မှာဆိုတော့ ဘယ်သွားပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသေးရင် အခရာမှာ ညွှန်ပေးစရာ ဒီလို ရှယ်မိုက်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ ရှိပါတယ်လို့။
လာပါပြီ၊ လာပါပြီ၊ အငြိမ်လေးပေ့ါ။ စာအုပ်လေးဖတ်ပြီး ဒီပိတ်ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းချင်တယ်ဆိုရင် ကံ့ကော်ဝတ်ရည်ရဲ့ စာအုပ်အိမ်နှစ်ပတ်လည်ပွဲလေးရှိတယ်ဗျ။ ကံ့ကော်ဝတ်ရည်စာအုပ်အိမ် နှစ်ပတ်လည်အနေနဲ့ စာအုပ်တွေကို ဈေးလျှော့ပေးမှာမို့ လက်မလွှတ်သင့်ပါဘူး။ ဘယ်စာအုပ်ကိုမဆို တစ်အုပ်ချင်းဝယ်ရင် ၂၀% ၊ စုစည်းထားတဲ့ Collection အလိုက်ဝယ်ရင် ၂၅% နဲ့ တစ်သောင်းဖိုးထက် ကျော်လွန်ပြီး ဝယ်ရင် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဗလာမပါကံစမ်းခွင့်စတဲ့ အစီအစဉ်တွေ စောင့်နေပါတယ်။
နေ့ရက်ကတော့ သောကြာနေ့ ၁၀.၁၁.၂၀၁၇ ကနေ တနင်္ဂနွေနေ့ ၁၂.၁၁.၂၀၁၇ အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကတော့ မနက် ၉နာရီကနေ ညနေ ၆နာရီအထိပါ။ နေရာကတော့ ကံ့ကော်ဝတ်ရည်စာအုပ်အိမ် (အမှတ် ၅၁၊ ပထမထပ်၊ ရေကျော်လမ်းမကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်မှာပါ။ စာအုပ်ကြိုက်သူတွေကတော့ သွားကို သွားရမယ့် ပွဲလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
၂။ Free PreClosing Party Memory!
Memory ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ ပိတ်ပွဲအကြိုအနေနဲ့ ဝဇီရာရုံ (၃၃လမ်းနဲ့ ၃၄ လမ်းကြား၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမပေါ်) ရဲ့ လသာဆောင်မှာ ပါတီရှိနေပါတယ်။ ဝင်ခွင့်ကတော့ အခမဲ့ပါပဲ။ တေးဂီတဖျော်ဖြေမှုအနေနဲ့ DJ Fisewook က ဖျော်ဖြေမှာ ဖြစ်ပြီး Carlsberg Draft Beer တစ်ခွက်ကို ၂၀၀၀ ကျပ်၊ Gin Tonic နဲ့ Whiskey Coke တစ်ခွက်ကို ၃၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချပေးမယ့်အပြင် Snack တွေလည်း ထားပေးထားမှာပါ။ အချိန်ကတော့ ည ၈နာရီခွဲကနေ စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အကြောင်းစကားစမြည်ပြောရင်း Chill လို့ ရတာပေါ့။
၃။ Waterzonic Myanmar
အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ Waterzonic Myanmar ပွဲကြီးလည်း ၁၁.၁၁.၂၀၁၇ စနေနေ့ဆို ရောက်လာပါပြီခင်ဗျာ။ EDM ကြိုက်သူတွေ ၊ကဲဖို့ စီစဉ်ထားသူတွေကတော့ Ready ဖြစ်နေလောက်ပြီပေ့ါ။ Lineup အနေနဲ့ Knife party၊ TUJAMO ၊ MaRLo နဲ့ ZANON တို့ ဝုန်းမှာ ဖြစ်ပြီး ရေလေးလည်း ဖြန်းပေးဦးမှာဆိုတော့ ပူအိုက်နေမှာလည်း မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးပေါ့။ အဲ့ဒါအပြင် ပွဲအပြီးမှာလည်း Waterzonic လက်မှတ်ရှိသူတိုင်း Club Pyrite မှာလုပ်မယ့် After Party ကိုသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ အရှိန်မသေသေးရင် ဆက်ဝုန်းလို့ ရတယ်နော်။ လက်မှတ်ကတော့ GA (Regular) ကို 40000 ks နဲ့ ရောင်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ လက်မှတ်တွေကိုတော့ www.waterzonicmyanmar.com မှာ ရရှိနိုင်တယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
၄။ JAM IT!// FIVE YEARS!
ဒါကတော့ JAM IT ရဲ့ ငါးနှစ်မြောက်ပွဲလေးပါပဲ၊ ဒါကြောင့်အရင် JAM IT ပွဲတွေမှာ ပါခဲ့တဲ့ Rock ၊ Punk၊ Hip Hop၊ Indie နဲ့ Metal Bands တွေရဲ့ Live Performances တွေကို ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာကတော့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ရှိတဲ့ Pauk Kan Food Court & Night Bazaar မှာ ဖြစ်ပြီး အချိန်ကော့ စနေနေ့ ညနေ ၅ နာရီကနေ ည ၁၀နာရီထိဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်း No U Turn၊ Fever 109၊ The Myth နဲ့ Tu & LOFT အဖွဲ့တွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်သလို One Way ၊ Wareru ၊ Jimmy Jacobs & Mr.Luffie နဲ့ Si Phyo Min တို့လည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိသားစုလိုက် Pauk Kan Night Bazzar သွားရင်း သီချင်းနားထောင်လို့ ရပါတယ်။
ဒီတဈပတျပိတျရကျမှာ သှားစရာလာစရာလေးတှေ (၁၁.၁၁.၂၀၁၇)
အခရာပရိသတျကွီးရေ… ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ သောကွာညလေး ဖွဈပါစလေို့ အရငျဆုံး ဆုတောငျးပေးပါရစေ။ ဒီတဈပတျ တင်ျနလာနအေ့ပါအဝငျ ၃ ရကျတောငျ ပိတျမှာဆိုတော့ ဘယျသှားပွီး ဘာလုပျရမှနျးမသိသေးရငျ အခရာမှာ ညှနျပေးစရာ ဒီလို ရှယျမိုကျတဲ့ အစီအစဉျတှေ ရှိပါတယျလို့။
လာပါပွီ၊ လာပါပွီ၊ အငွိမျလေးပေ့ါ။ စာအုပျလေးဖတျပွီး ဒီပိတျရကျတှကေို ဖွတျသနျးခငျြတယျဆိုရငျ ကံ့ကျောဝတျရညျရဲ့ စာအုပျအိမျနှဈပတျလညျပှဲလေးရှိတယျဗြ။ ကံ့ကျောဝတျရညျစာအုပျအိမျ နှဈပတျလညျအနနေဲ့ စာအုပျတှကေို ဈေးလြှော့ပေးမှာမို့ လကျမလှတျသငျ့ပါဘူး။ ဘယျစာအုပျကိုမဆို တဈအုပျခငျြးဝယျရငျ ၂၀% ၊ စုစညျးထားတဲ့ Collection အလိုကျဝယျရငျ ၂၅% နဲ့ တဈသောငျးဖိုးထကျ ကြျောလှနျပွီး ဝယျရငျ စာအုပျတဈအုပျကို ဗလာမပါကံစမျးခှငျ့စတဲ့ အစီအစဉျတှေ စောငျ့နပေါတယျ။
နရေ့ကျကတော့ သောကွာနေ့ ၁၀.၁၁.၂၀၁၇ ကနေ တနင်ျဂနှနေေ့ ၁၂.၁၁.၂၀၁၇ အထိ ဖွဈပါတယျ။ အခြိနျကတော့ မနကျ ၉နာရီကနေ ညနေ ၆နာရီအထိပါ။ နရောကတော့ ကံ့ကျောဝတျရညျစာအုပျအိမျ (အမှတျ ၅၁၊ ပထမထပျ၊ ရကြေျောလမျးမကွီး၊ ပုဇှနျတောငျမွို့နယျမှာပါ။ စာအုပျကွိုကျသူတှကေတော့ သှားကို သှားရမယျ့ ပှဲလို့ ဆိုခငျြပါတယျ။
Memory ရုပျရှငျပှဲတျောရဲ့ ပိတျပှဲအကွိုအနနေဲ့ ဝဇီရာရုံ (၃၃လမျးနဲ့ ၃၄ လမျးကွား၊ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးလမျးမပျေါ) ရဲ့ လသာဆောငျမှာ ပါတီရှိနပေါတယျ။ ဝငျခှငျ့ကတော့ အခမဲ့ပါပဲ။ တေးဂီတဖြျောဖွမှေုအနနေဲ့ DJ Fisewook က ဖြျောဖွမှော ဖွဈပွီး Carlsberg Draft Beer တဈခှကျကို ၂၀၀၀ ကပျြ၊ Gin Tonic နဲ့ Whiskey Coke တဈခှကျကို ၃၀၀၀ ကပျြနဲ့ ရောငျးခပြေးမယျ့အပွငျ Snack တှလေညျး ထားပေးထားမှာပါ။ အခြိနျကတော့ ည ၈နာရီခှဲကနေ စတငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ရုပျရှငျအကွောငျးစကားစမွညျပွောရငျး Chill လို့ ရတာပေါ့။
အားလုံးစောငျ့မြှျောနတေဲ့ Waterzonic Myanmar ပှဲကွီးလညျး ၁၁.၁၁.၂၀၁၇ စနနေဆေို့ ရောကျလာပါပွီခငျဗြာ။ EDM ကွိုကျသူတှေ ၊ကဲဖို့ စီစဉျထားသူတှကေတော့ Ready ဖွဈနလေောကျပွီပေ့ါ။ Lineup အနနေဲ့ Knife party၊ TUJAMO ၊ MaRLo နဲ့ ZANON တို့ ဝုနျးမှာ ဖွဈပွီး ရလေေးလညျး ဖွနျးပေးဦးမှာဆိုတော့ ပူအိုကျနမှောလညျး မစိုးရိမျရတော့ဘူးပေါ့။ အဲ့ဒါအပွငျ ပှဲအပွီးမှာလညျး Waterzonic လကျမှတျရှိသူတိုငျး Club Pyrite မှာလုပျမယျ့ After Party ကိုသှားလို့ရတယျဆိုတော့ အရှိနျမသသေေးရငျ ဆကျဝုနျးလို့ ရတယျနျော။ လကျမှတျကတော့ GA (Regular) ကို 40000 ks နဲ့ ရောငျးနတော တှရေ့ပါတယျ။ လကျမှတျတှကေိုတော့ www.waterzonicmyanmar.com မှာ ရရှိနိုငျတယျလို့ ကွညောထားပါတယျ။
ဒါကတော့ JAM IT ရဲ့ ငါးနှဈမွောကျပှဲလေးပါပဲ၊ ဒါကွောငျ့အရငျ JAM IT ပှဲတှမှော ပါခဲ့တဲ့ Rock ၊ Punk၊ Hip Hop၊ Indie နဲ့ Metal Bands တှရေဲ့ Live Performances တှကေို ကွညျ့ရှုရမှာ ဖွဈပါတယျ။ နရောကတော့ ပွညျသူ့ရငျပွငျမှာ ရှိတဲ့ Pauk Kan Food Court & Night Bazaar မှာ ဖွဈပွီး အခြိနျကော့ စနနေေ့ ညနေ ၅ နာရီကနေ ည ၁၀နာရီထိဖွဈပါတယျ။ အဖှဲ့တှအေနနေဲ့လညျး No U Turn၊ Fever 109၊ The Myth နဲ့ Tu & LOFT အဖှဲ့တှေ ပါဝငျမှာ ဖွဈသလို One Way ၊ Wareru ၊ Jimmy Jacobs & Mr.Luffie နဲ့ Si Phyo Min တို့လညျး ပါဝငျမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ မိသားစုလိုကျ Pauk Kan Night Bazzar သှားရငျး သီခငျြးနားထောငျလို့ ရပါတယျ။
ငရုတ်သီးအပြည့်နဲ့ ပူပူစပ်စပ် ရှုးရှဲထအောင်သောက်ရမယ့် Hot Pot ဆိုင်ဆန်းလေး
by Ei Ei . 15 hours ago
ရွှေတောင်ကြားက ဈေးသိပ်တန်ပြီး အီစိမ့်အောင်ကောင်းတဲ့ ရွက်ပုန်းသီး Sausage ဆိုင်လေး
ကောင်မလေးတွေ ကြွေမယ့် Dagon Center က ပန်းသွေးရောင်ခြယ် ကမ္ဘာငယ်လေး
အလွန်အကျူး မြူးလို့ကောင်းတဲ့ ဆယ်လီတို့ စုံရပ် အထာကျကျ Pine 24
by Ei Ei .3weeks ago
ဆန်းကြယ်ကော့တေးလ်တွေနဲ့ ဆွဲညို့နေတဲ့ မြို့ပြရဲ့ အနုပညာအဆန်ဆုံး The Blind Tiger